Cunto: Sababtee sababta Plugins Plugins oo ka Dhumay Tilmaamaha Plugin?
Qiyaastii konton kun oo plug-ka WordPress ah ayaa lagu heli karaa diiwaanka WordPress ee plugin, laakiin mar marka qaarkoodna qaar ayaa baaba'aya, mana fahmin sababta ay u socoto. Waxaa jira sababo macquul ah sababta ay tani u dhacayso, laakiin macluumaadka marnaba lama heli karo si cad.
Ross Barber, khabiir hogaamiye u ah Semt , wuxuu sheegaa in haddii plugin ay si lama filaan ah u baaba'day oo aad rabto inaad ogaatid sababta ka hor inta aadan bilaabin baaritaanka, waa inaad hubisaa dashboardkaaga WordPress si aad u hesho fursadaha soo socda
1. Goobtaadu waa ay hoos u dhacday
Mararka qaar WordPress ama boggaga internetka waa la jebin karaa iyadoon aqoontaada. Fursadaha waa in xogtaada la xaday oo pluginsku si fiican uguma shaqaynin WordPress. Halkaan ayaan kuu sheegi karaa in WordPress uu masuul ka yahay fulinta jadwalka aasaasiga ah ee dhammaan khidadaha la rakibay oo ka saari kara codadka lagu muday maadadaada, laakiin haddii dhibaatadu sii socoto, waa inaad isla markiiba la tashatid WordPress ama khabiir IT - nazca lines adventure tours.
2. Fiiri lambarka farsameedka ee tuulooyinka suurtagal ah
Sababta kale ee aad uhesho WordPress ma muujineyso waa adiga ama qof kale uu bedelay codeeyaha Editor. Mararka qaar hackers iyo spammers ka faa'iideystaan ​​faylasha fulinta iyo xeerarka tifaftirka ee boggaaga WordPress iyo geliyaan codkooda xaasidnimo ee iyaga ku jira. Fursadaha ayaa ah in mid kasta oo ka mid ah xeerarkan ay keeneen plugin-kaaga si ay u waayaan liiska fiilooyinka, laakiin wax walwal ah ma jiro. Waxaad ubaahan tahay inaad tagto qaybta Qorayaasha oo aad hubiso in wax walba caadi yahay..Haddii aad aragtid qaar ka mid ah nidaamka shaki laga galo, waa inaad ka saartaa sida ugu dhakhsaha badan.
3. Dhibaatooyinka ku jira faylka PHP
Sida qaybta falanqaynta, feylkaaga PHP waxaa laga yaabaa in ay sameeyaan qaar ka mid ah hacker ama maamule kale. Waxaad ubaahan tahay inaad iska hubiso goobaha faylka ee faylkan oo aad ka heshid, haddii loo baahdo. Inta badan, faylasha noocaas oo kale ayaa lagu sameeyaa koodhadhka sababo xaasidnimo ah
4. Ka taxaddar qalabyada cirbadaha lagu xiro
Waa in aanad marnaba isticmaalin qalabka cirbadaha ee automatic ah ee boggaaga WordPress. Tani waa sababta oo ah nidaamyada noocaas ah ay sameyn karaan qaar ka mid ah ama dhammaan ekooyinka ay ka lumayaan diiwaanka, xitaa waxaad lumi kartaa helitaanka bogga internetka. Kiisaska mararka qaarkood waxay sameeyaan weerarrada Adeegga Diidmada Adeegga iyo inay isku dardariyaan dhowr lambarrada xaasidnimo leh goobtaada adoo adeegsanaya qalabkan, sidaa daraadeed waxaanu kugula talineynaa in aad ka fogaato qalabka koodhka iyo hubinta ilaalinta goobtaada
5. Wordpress laga yaabaa inay ka saaro plugin laftiisa
Mararka qaar, WordPress ayaa ka saaraya ama furfuraya plugin lafteeda iyo sababta loo garanayo. Si kastaba ha noqotee, waad ka hubin kartaa goobahaaga ammaanka iyo in aad la xiriirto kuwa waayeelka ah si aad u joojiso WordPress inaad ka saarto dhawr fure oo mustaqbalka ah. Haddii aad WordPress ka hadasho muddo dhowr ah oo aadan ka warqabin, fursadaha waa in fiiladaada laga saaro buugga si toos ah.
6. Cusbooneysii kumbuyuutarkaaga si aad uga hortagto in lagaa saaro
Mararka qaar khidadaha wakhtiga la soo dhaafay ayaa si toos ah loo cusbooneysiiyaa ama laga saaraa diiwaanka WordPress plugin. Si looga hortago arrintan, waa inaad si joogta ah u cusbooneysiisaa fiilooyinkaaga aadna u ilaaliso heerkoodu sida ugu sarreeya.